विदेश बाट पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? कुन देशको कति ? हेर्नुहोस् – Tufan Media News
विदेश बाट पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? कुन देशको कति ? हेर्नुहोस्
२५ असार २०७८, शुक्रबार १२:१४
काठमाडौं / आज शुक्रबार अमेरिकी डलरसहित अन्य केही देशको विनिमयदर घटेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १८ रुपैयाँ ५९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १९ रुपैयाँ १९ पैसा तोकिएको छ ।
एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ७८ पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ २ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ २० पैसा तोकिएको छ ।एक मलेसिया रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ५३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ६८ पैसा तोकिएको छ । एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ९३ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९५ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै जापानी यनको खरिददर १० रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १० रुपैया ७५ पैसा तोकिएको छ । यस्तै एक अस्ट्रेलियन डलरको खरिददर ८९ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ ।एक बहराइन दिनारको खरिददर ३ सय १४ रुपैयाँ ५५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १६ रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ। एक युरोको खरिददर १ सय ४० रुपैयाँ ८७ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १ सय ४१ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ ।
त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ५४ पैसा तोकिएको छ । एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६४ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६५ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ।